म:रेका काग बटुलेर, कुखुराको मासु भन्दै पकाएर बेचे ब्यापारीले ! – ABC NEWS 24
← कोरोनाबाट पनि बच्नु छ, बिहे पनि गर्नु छ! यो जोडिले अपनाएको उपायले बिश्व चकित !
बिहेको त्यो पहिलो रात ! जब उनी सुक्क सुक्क गरेर रुन थालिन् – वास्तविक मनछुने कथा” →